MUQDISHO, Soomaaliya - Ganacsiga Suuqa weyn ee Baraakaha ayaa saaka dib u furmay, kadib markii uu xirnaan labadii maalmood ee lasoo dhaafay, sababo la xiriira casnhuur cusub oo dowladda Federaalka kusoo rogtay Ganacsatada.
Waxaa si caadi ah u shaqeynaya howlihii ganacsiga ee looga bartay Suuqa, iyadoo tallaabadan ay timid kadib markii cabasho xooggan ay shacabka gobolka Banaadir ka muujiyeen xirnaanshaha Suuqa oo nolosha dad badan ku tiirsanayd.
Inkastoo Suuqa dib loo furay, waxaa wali aan xal laga gaarey sababtii markii hore loo xiray ee ahayd canshuurta Iibka ee Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya ay soo rogtay dhawaan.
Gudi ay sameysteen Ganacsatada ayaa Kulamo aan wax natiijo ah kasoo baxin la yeeshay Wasiirka Maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaalle Beyle iyo Gudoomiyaha gobolka Banaadir, Cabdiraxmaan Yariisow intii uu xirnaa Suuqa Baakaraha.
Markii ay dhegaha ka fureysteen Mas'uuliyiintii ay la kulmeen, Ganacsatada ayaa cabashadooda u gudbiyey Gudiga Ganacsiga iyo Warshadaha ee Gollaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Waxaa sidoo kale, wali ismariwaa ka taagan yahay Dekedda Muqdisho, oo ay ku xanniban yihiin Maraakiib dhowr ah oo Ganacatada u raran, kuwaasi oo saameyn ku yeelatay Canshuurta cusub ee soo kordhisay dowladda.
Ganacsatada waxay sheegeen inaysan awoodin bixinta labo canshuur oo kala ah mida dekedda looga qaado iyo tan cusub ee Iibka [VAT], taasi oo Ganacsatada laga qaadin 27-kii sano ee lasoo dhaafay.